राजस्वको आधार बन्दै अटो क्षेत्र, लक्ष्यभन्दा बढी नै उठ्छ राजश्व
काठमाडौं, २२ कातिक
पछिल्लो समय अटोमोबाइल्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ । विज्ञान प्रविधि र विश्व व्यापिकरणको लहर बढेसंगै नेपालमा पनि विस्तार भएको अटो बजारबाट राज्यले पनि आम्दानीको दायरा वढाउने अवसर पाएको छ । अहिले अटो क्षेत्र राजस्व बृद्धिको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ । प्रखेश नं ३ को यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ को कात्तिक दोस्रो सातासम्म ६० करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।
सो कार्यालयले आ.व. २०७५ र ०७६ मा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । यो लक्ष्य भन्दा बढि हो । सो कार्यालयले एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर सो आर्थिक वर्षमा लक्ष्य थप ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
विगत ३ वर्षको सवारी राजस्व विवरण यस्तो छ
अटो क्षेत्रबाट राज्यले आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा राज्यले २३ अर्व ६४ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सातवटै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट उक्त राजस्व उठेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी राजस्व प्रदेश ३ बाट संकलन भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आ.व.मा प्रदेश ३ बाट मात्रै १२ अर्ब १३ करोड ८५ लाख ४२ हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । राजस्व असुलीको सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेकै यातायातका साधनहरू हुन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ९ खर्ब ८४ अर्बको आयात गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १२ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । गत वर्ष सवारी साधन र त्यसका पार्ट्स मात्रै ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । यसबाट ८० अर्ब भन्सार राजस्व संकलन गरिएको थियो । राजस्वमा यातायातको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
कुन शिर्षकमा उठ्छ राजस्व ?
यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले सवारीसाधन कर, सडक सम्भार तथा मर्मत शुल्क, चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजत दस्तुर, इम्बोस्ड नम्बर जडान शुल्क, दण्ड जरिवाना र यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेका हुन् ।
सवारी साधन कर सङ्कलन, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताबलगायत शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन बढेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।